वीर्य भण्डारण र दान : पछिका लागि वा निसन्तान दम्पतीमा निकै प्रभावकारी (भिडियो सहित) – List Khabar
Home / स्वास्थ्य / वीर्य भण्डारण र दान : पछिका लागि वा निसन्तान दम्पतीमा निकै प्रभावकारी (भिडियो सहित)
वीर्य भण्डारण र दान : पछिका लागि वा निसन्तान दम्पतीमा निकै प्रभावकारी (भिडियो सहित)
admin March 26, 2022 स्वास्थ्य Leaveacomment 113 Views
मानसिक तनावले मुटुलाई कसरी असर पुर्‍याउँछ ? सबैले जानीराखौं
कुन पानी स्वच्छ, कुन दूषित ?
सोच्दै नसोचेका फाइदा रहेछ अण्डाको बोक्राको, यत्रो समय थाहै पाइएन
वीर्य तथा अण्ड भण्डारणका पनि केही विधि र अवस्थाहरू छन् । जस्तो, रेडियोथेरापी र किमोथेरापी गरिरहेका महिला तथा पुरुषको लागि शुक्रकिट तथा अण्ड भण्डारण प्रभावकारी बन्न सक्ने डा. सिंह सुनाउँछिन् । क्यान्सर तथा अन्य रोग लागेर रेडियोथेरापी तथा किमोथेरापी गरिरहेका बिरामीको वीर्य तथा अण्डबाट गर्भधारण कठिन रहेकोले त्यस्तालाई वीर्य भण्डारण प्रभावकारी रहेको उनी सुनाउँछिन्
वीर्य भण्डारण बिहे गरेर पनि ढिलोगरी बच्चा जन्माउने दम्पतीको लागि पनि प्रभावकारी रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । आफ्नो करियर वा अन्य कारणले ढिलागरी बच्चा जन्माउँदा बच्चामा त्यसको असर पर्न सक्ने भएकोले त्यसबाट बच्नको लागि पनि वीर्य भण्डारण प्रभावकारी हुने डा. सिंह बताउँछिन् ।
‘सामान्यतया महिला ३५ वर्षभन्दा पछि गर्भधारण गर्दा महिलाहरूमा पनि विभिन्न खाले दीर्घरोग हुने र बच्चामा पनि केही असर देखिने जोखिमहुन्छ । तर ३० वर्षमा वीर्य वा अण्ड भण्डारण गरिएको छ भने ३५ वर्षमा बच्चा जन्माउँदा पनि ३० वर्षको उमेरमा जन्माएको जस्तै स्वस्थ बच्चा जन्मिन्छ’ उनी भन्छिन् ‘अहिले धेरैमा प्रचारप्रसार नभएको भए पनि यो आफैंमा प्रभावकारी विधि हो ।’ जतिले यसबारेमा बुझेका छन् उनीहरू यसप्रति आकर्षित हुने गरेको उनी बताउँछिन् ।
कति समयसम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ, शुल्क कति लाग्छ ? वीर्य भण्डारण नेपालमा धेरै वर्षदेखि चलिरहेको चलन हो । यो आफैंमा वैध प्रणाली पनि हो । तर धेरैजना यसप्रति बेखबर हुँदा यसका प्रयोगकर्ताहरू धेरै नबढेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । डा. सिंह वीर्य वा अण्ड दुवैको भण्डारणको अधिकतम समय नतोकिएको बताउँछिन् ।
यो मान्छेको आवश्यकता अनुसार ८-१० वर्षसम्म पनि फ्रिज गरेर राख्न सकिन्छ । वीर्य वा अण्ड भण्डारण गर्दा व्यक्तिको विवरणहरू सबै टिपेर सुरक्षित र व्यवस्थित तरिकाले भण्डारण गर्न सकिन्छ । ‘कसैले शुक्रकिट वा अण्ड फ्रि गरेर राख्नुभएको छ भने हामी सबै लेभल गरेर यसलाई फ्रिजिङ गर्ने गर्छाैं’ उनी भन्छिन् ‘जति समयपछि आफूलाई बच्चा जन्माउन मन लाग्छ, त्यसपछि त्यसलाई गर्भधारण गराइन्छ ।’
डा. सिंहका अनुसार एग फ्रिजिङको लागि वर्षको ५० हजार र शुक्रकिट फ्रिजिङको वार्षिक १५ हजार रुपैयाँ लाग्छ । १० वर्षसम्म फ्रि गरेर राख्न मन छ भने अण्डको लागि ५ लाख र १० वर्ष वीर्य भण्डारणको लागि एक लाख ५० हजार रुपैयाँ लाग्ने गरेको चिकित्सकहरु बताउँछन् । यसरी राखिएको वीर्य वा अण्डलाई रुम टेम्प्रेचरमा ल्याएर गर्भाधारण गरिने डा. सिंह बताउँछिन् ।
त्यसो त वीर्य वा अण्ड दान दिन र लिने चलन पनि नेपालमा चलिरहेको छ । अस्पतालमा यस्ता दाताहरू प्रशस्तै भेटिने गरेको डा. सिंह बताउँछिन् । यो सामान्यतया शुक्रकिट र अण्डले राम्रो काम नगरेर निःसन्तान भएका दम्पतीहरूको लागि प्रभावकारी छ । यसरी दान दिइएको वीर्य वा अण्ड पनि फ्रिज गरेर राख्न मिल्छ । कोही महिलाको डिम्बासयमा अण्डको उत्पादन नै कम भइरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूको डिम्बासयबाट अण्ड झिकेर शुक्रकिटसँग मिसाएर वैकल्पिक रुपमा यसको प्रयोग गर्न सकिने डा. सिंह बताउँछिन् ।
सामान्यतया वीर्य र अण्डको दान लिंदा कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या नभएको युवायुवतीको खोजी गरिन्छ । विशेषगरी ३० वर्ष उमेर नपुगेका र सकेसम्म बच्चा भइसकेका युवायुवतीबाट वीर्य वा अण्ड दान लिनु उचित हुने डा. सिंह बताउँछिन् ।
Previous चर्चित नायक पल शाह, यस्ता छन् रोचक जानकारी …।
Next भर्खरै पीडित वालिकाको कालो कर्तुत यसरी भयो पर्दाफास भयो
तपाँई बिहानै खाली पेटमा चिया पिउँनुहुन्छ ? एकपटक अवस्य पढ्नुहोस तपाँईलाई यस्तो हुनपनि सक्छ
बिहान–बिहानै खाली पेटमा चिया पिउने बानी धेरैजसोको हुन्छ । तर, खाली पेटमा चिया पिउँनाले एसिडिटी …